Kulan Wada Tashi Bulshada Rayidka ah oo Lagu Soo Gabagabeeyay Cadaado – STAR FM SOMALIA
Waxaa magaalada Cadaado ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug lagu soo gabagabeeyay kulan ballaaran oo ay soo qaban-qaabiyeen qeynaha kala duwan ee bulshada rayidka ah ee Soomaaliya kaas oo ay kaga tashanayeen xaaladda dalka Soomaaliya.
Shirweynaha ayaa waxaa isugu yimid Ururada bulshada rayidka ah ee ku mideysan Daladda Jilayaasha aan Dowliga ahayn ee Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya ee SOSCENSA iyo Daladda Jilayaasha aan Dowliga ahayn ee Puntland ee PUNSAA.
Kulanka ayaa furmay maalintii Arabacada oo ay taariikhdu ahayd 31 August waxaana lasoo gabagabeeyay Khamiistii oo ay taariikhdua ahayd Sebtember 1, waxaana diiradda lagu saaray kaalinta bulshada rayidka ah kaga aaddan horumarka dalka.
Ugu horeyn waxaa shirka ka hadlay gudoomiyaha daladda PUMSAA Nuur Shire Cismaan isagoo ka mahad naqay sida diirran ee loogu soo dhoweeyay degmada Cadaado. Gudoomiye Nuur Shire ayaa hadalka ku warejiyay gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xuseen si uu shirka u furo.
Gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xuseen ayaa xubnaha bulshada rayidka ah ee ka qeyb galayay shirka ku soo dhoweeyay magaalada Cadaado isagoo uga mahad celiyay ku qabashada shirka bulshada rayidka ah magaalada Cadaado wuxuuna u rajeeyay shirka in ay kasoo baxaan talooyin wax ku ool ah.
Arrimaha uu shirweynaha bulshada rayidka ah aadka u lafo guray waxaa ka mid ahaa nabadeynta beelaha, xoojinta nabad gelyada, wacyi galinta bulshada doorashooyinka la filaayo in dabayaaqada sanadkan ay ka dhacaan dalka.
Gabagabadii ayaa waxaa kasoo baxay war murtiyeed ka kooban 3 qodod ayaa warbaahinta u aqriyay Gudoomiyaha daladda Jilayaasha aan dowliga ahayn ee Puntland Nuur Shire Cusmaan.
War Mrtiyeed Shirka Bulshada Rayidka ah